Tim Cook anotaura nezve zvingaite kuenderana kweApple Penzura neiyo iPhone | IPhone nhau
Tim Cook anotaura nezve zvingaite kuenderana kweApple Penzura neiyo iPhone
Imwe yezvipokana zvikuru munhoroondo yaApple yaive iyo Apple Penzura, chishandiso kana chishongedzo chakatipa «analog» interface yekudyidzana nemidziyo yedu. Uye ini ndinoti kuvhurwa kwechigadzirwa ichi kunokatyamadza nekuti aive Steve Jobs iyeye paakapa iyo iPhone 4 akati: «Hapana anoda chinyoreso (chinyoreso chedigital) ».
Nekusvika kwePad Pro, ichi chishandiso chitsva chakasvika, uye kushoropodzwa kwevakomana veCupertino kwakamhanya senzizi dzeinki, kushoropodza kwakadzikama patakaona mikana yese yataive nayo nedhijisiti senge iyo. Apple Pencil. Apple Penzura yatakaona nekusvika kwePad Pro uye inogona kudaro enderana munguva pfupi ne iPhone... Hongu, zvave zviripo Tim Cook munhu akazvisimbisa.
Zvinoitwa nevanhu neApple Penzura Steve Jobs vangade, Ndozvakataurwa naTim Cook muna Chivabvu apfuura, uye izvo ndezvekuti Apple Penzura ndechimwe chemidziyo iyo yavari kuyedza kutengesa zvakanyanya. Dzokera ku "analog" muchinhu che-state-of-the-art. A Apple Pencil inowanikwa yePad Pro, iyo Iyo inogona kukurumidza kusvika iyo iPhone zvinoenderana nezvakataurwa naTim Cook pachake.
Kana iwe waedza zvese zvaunogona kuita neApple Penzura pane iyo iPad kana iPhone, iwe unozoziva kuti icho chinhu chinoshamisa.
Sezvo iwe wave kugona kuverenga, Tim Cook anotaura nezve iyo iPhone, iyo iPhone kusvika parizvino haina rutsigiro rweApple Penzura saka zvinonetsa kuti vanhu venyama vaone chimwe chinhu chakaitwa neApple Penzura pa iPhone ... Tichaona zvinoitika nezvose izvi, ndine chokwadi chekuti mangwana tichasiya kusahadzika muKeynote, asi kubva pakuona kwangu ichi chinhu chinofanira kunge chakaitwa naApple nekuburitsa kweApple Penzura pachayo iyo Ini handina chokwadi chekuti pakupedzisira inoenderana neiyo iPhone, neiyo iPhone Plus ini ndingashinga kutaura. Mangwana tichakuudza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Tim Cook anotaura nezve zvingaite kuenderana kweApple Penzura neiyo iPhone
Iwe murume, zvakataurwa naJobs kuti hapana munhu aida stylus inoda kuenda zvishoma kupfuura mutongo, kuti izvi zvinoita senge posvo kubva kune mumwe wevanovenga kunze uko akasununguka. Sezvo iwe uchiziva panguva iyoyo paive nemamwe emanyepo mafoni emafoni aida chinyoreso kusarudza zvinhu pachiratifomu mumamenyu aive achioneka, mamenu mune dhizaini yedesktop OS. Icho chaive chinyoreso uye icho chisiri kudiwa nemunhu.
Emiliano Rodini akadaro
Pakanga pari pakuratidzwa kweiyo yekutanga iPhone iyo Steve akataura kuti hapana munhu aida stylus. Akanga akarurama, uye nanhasi achiripo.
Asi iwe unofanirwa kuziva kusiyanisa chinonzi stylus pane smartphone uye chii chinonzi Apple Penzura pane iyo Pro Pro.
Iyo Apple Penzura chishandiso chebasa icho chinonyatsogadzirisa iyo iPad, zvese zvekunyora, kudhirowa, kugadzira, kupenda, nezvimwe. chero munhu akawana mukana wekuishandisa achaziva zvandiri kutaura nezvazvo.
Chinyoreso chenharembozha chaive chekutsiva chigunwe, zvakapusa. Hongu kana hongu iwe waida stylus yekusarudza chero chinhu parunhare, waisakwanisa kuzviita neminwe yako, iwe waitsamira 100% pairi.
Nezve kuenderana kweApple Penzura neiyo iPhone, gamuchirai, asi ini handioni zvine musoro pakuishandisa pachiratidzisi isingasviki 5.5 inches, asi, pakuravira… mavara.
Pindura Emiliano Rodini
Chii chatingatarisira kubva pakuratidzwa kweiyo iPhone 7
Luca Todesco anotsika-tsika nezve jailbreak yeIOS 10 pazuva rekuburitswa kwayo